Home News Masuul sare oo ktirsan Dowladda Uganda oo digniin adag u diray Ciidamada...
Masuul sare oo ktirsan Dowladda Uganda oo digniin adag u diray Ciidamada Soomaaliya.
Gudoomiye ku xigeenka Baarlamaanka Dalka Uganda Jocob Oulanyah ayaa ciidamada Soomaalida ah ee dalkaasi ku tababarta ugu baaqay in ay qeyb ka noqdaan dadaalada Soomaali ay ku qaabeyneyso msutaqbalkeeda.
Waxa uu ku nuux nuuxsaday in loo baahanyahay in Soomaalida ay isku tashato si ay kaga soo kabato burburkii dowladdii dhexe waxa uuna sheegay in uu rajo badan ka qabo in ay ka maarmi doonaan Kaalmada Caalamka.
Oulanyah oo xafiiskiisa kula kulmay wafdi saraakiil u badan oo soomaali ah ayaa ku bogaadiyay sida ay ugu go’antahay in dalkooda ay xasiliyaan oo ay nabad kusoo dabaalaan waxa uuna ugu baaqay in ay sii labba jibaaraan dadaaladaasi si buu yiri Soomaaliya ay kaga maaranto Ciidamada Nabad ilaalinta ee Midowga Afrika oo Uganda qeyb ka tahay.
“Waxa kaliya ee Soomaaliya caawin kara waa in aynan gadaal u eegin dagaalkii sukeeye oo ay aayahooda oo kaliya eegaan waxaana hubaa in mar dhaw Soomaaliya ay ka kaaftoomi doonaan Caawinaada dalalka shisheeye” ayuu sheegay Gudoomiye ku xigeenka Baarlamaanka Dalka Uganda Jocob Oulanyah.
Mina Xuseen oo kamid ah Ciidamada Soomaalida ah ee Tababarka uu ugu socda dalkaasi Uganda ayaa sheegtay in wax badan ay ka qaadan doonaan hadalka Gudoomiye Jocob Oulanyah.
“Markayagii hore wax rajo ah ma laheyn balse markii aan tababarkaan qaadanay waxaan yeelanay rajo waxaana aaminsanahay in wax aan ka badeli karno xaalada amni ee dalkeena hooyo” ayey sheegtay Mina Huseen.
Previous articleShir heer calaami ah oo looga hadlayo ganacsiga oo maanta muqdisho ka furmay
Next articleRW Kheyre “Dowladda waxay aruurisay canshuurtii ugu badneyd 30 sano kaddib “Dhageyso”
Xildhibaan Fiqi:”Dowladda waxa ay caburinaysaa xisbiyada siyaasadeed ee dalka”
Waa Side Xaalada Magaalada Gaalkacyo Ee Gobolka Mudug